KaMose - evelele wezangaphakathi. Incazelo izinhlobo ezahlukene KaMose
Minyaka yonke uhla izinto kokuqeda ikhulisa kancane kancane futhi ikhasimende is ziba nzima ukuba benze isinqumo esivuna omunye wabo. Abafundi bethu abaningi banesithakazelo KaMose - .. izinhlobo zayo, obandayo imishini, isicelo, njll Namuhla, uma silinga ukuphendula yonke le mibuzo.
Uma umuntu ecabanga ukuthi lesi sici design - yafika yesimanje, kuba iphutha ngokujulile. A ezindala kakhulu futhi kabanzi lokuphila elalisetshenziswa okhokho bethu ubuciko KaMose. Lokhu Russia Lasendulo (X leminyaka) kwaba indlela yokwenza izindonga naphansi emasontweni, amasonto, amasonto.
KaMose - okusebenza yobuciko eyenziwe izingcezu ezincane izinto ezihlukahlukene - .. Glass, itshe, njll Njengoba igama elithi 'KaMose', usalokhu uyimfihlakalo. Kulesi senzakalo, kukhona izinguqulo eziningi. Omunye wabo - igama lihlotshaniswa inqubo wokwakha, abanye kubonakala ecace kakhudlwana. Kukholakala ukuthi leli gama lihunyushwe lisuselwa Latin, futhi lisho "ukuba ozinikele kuya Muses."
Izibonelo zokuqala ukusetshenziswa panel KaMose babonwa ezihlobene BC IV leminyaka. e., itholakala ezindaweni eziningi eMesophothamiya.
Noma yimuphi KaMose - iyiqoqo iphethini izingxenye eziningi ezincane ngezinto ezahlukene. manje izimfihlo emidala ngokuvamile elahlekile lokhu art uye ngempumelelo esikhundleni ubuchwepheshe obusha ezimbonini kanye isitayela.
Namuhla, kukhona isibalo esikhulu amafemu ukuthi ngokukhethekile ukudalwa izingoma KaMose. Ngamunye unikeza imidwebo yabo futhi izindaba. Kodwa uma akekho kubo musa anelise izifiso ikhasimende, lapho ungafaka umyalelo ku indaba emfushane yakho. Kubalulekile ukwazi ukuthi igama elithi bokubeka panel KaMose kufinyelelwa hhayi kuphela yinkimbinkimbi isithombe, kodwa futhi ukuhlukahluka izinto zalo ephambili.
Kuze kube manje, lokhu kungahle kube okokusebenza ezivamile. Ukuze enembile, sikhuluma ingilazi Venetian, eyenziwe ukushisa ukumelana, abandayo nemithi, ukushaqeka ukumelana futhi KaMose okuhlala. Lena impahla ethandwa kakhulu futhi ngenxa ezahlukene imibala. Ukuze kuzuzwe lokhu umphumela ekukhiqizeni ingilazi kuwo wengeze ezihlukahlukene izakhi - cadmium, selenium, boron ngisho namaminerali lulwimi eziyigugu (Aventurine, unina pearl).
Ezimweni eziningi, Patterned izakhi ingilazi KaMose (amamojuli noma chips) zenziwa square okwenyanga. I zikanokusho nomniningwane, kulapho kuyoba ngokuningiliziwe isithombe nokuboniswa esinembile.
Glass KaMose - sisetshenziselwa izinto eliye lasetshenziswa ngempumelelo ulwelwesi izindonga naphansi kunoma iyiphi izikhala okuvalelwe - kusukela zangasese ukuze emakhishini namachibi. Ngaphezu kwalokho, sibukeka sisihle ekuklanyweni fireplaces futhi ifenisha.
ethandwa kakhulu futhi smaltovaya KaMose. Lolu hlobo ingilazi impahla, kodwa kwalokho potassium nosawoti esikhundleni sodium njengoba kwaba njalo endabeni yokuqala. Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukuthola umbala okukhulu kakhulu nokuhlala njalo, ngokuphelele elingenalo iyiphi izilongotshane emhlophe.
Lokhu KaMose ubukeka ehlonipheke kakhulu. chips zako ziyizindlela smooth kakhulu futhi kumnandi touch. It has izici ephakeme kunaleyo ezishibhile ingilazi KaMose amaphethini. Ngokwesibonelo, nemihuzuko ukumelana evumela ukusebenzisa kwayo hhayi endlini kuphela kodwa futhi ngaphandle.
Ngokubukeka, chips Ceramic musa ihluke tile, ngaphandle ukuthi ubukhulu. Bangase bathathe ngesimo isikwele noma unxande. Imibala Nezindwangu shades kukhona ezihlukahlukene.
Lolu hlobo KaMose kungenzeka sizikhandle ezicwebezelisiwe, noma iqukathe "imiphumela ekhethekile" - ukuqhekeka okuncane phezu (crackles), inclusions ezinye imibala, semfene eyenziwe. amathayili Unglazed has a isakhiwo ukungena nakwamanye amazwe, okuyinto luhambisana nomthwalo enkingeni ehambisana.
KaMose bobumba ilungele ekucubunguleni ezihlukahlukene evele, endlini futhi bengaphandle.
Esikhathini ukukhiqizwa kulolu hlobo KaMose zisebenzisa izinhlobo ezahlukene itshe, ezisukela tuff engabizi futhi kubandakanya izinhlobo ezingavamile lejaspi, i-onikisi zemabula. Umbala le nto uhlukile, ngakho isithombe le nto eyingqayizivele ngamunye.
Ngokuthenga wamatshana zamatshe wemvelo, sicela uqaphele ukuthi lokhu kuyinto impahla kuqhathaniswa esithambile. It iqeda ukusetshenziswa zokuhlanza olwalwenza, emabhulashini kanzima. Okuwukuphela kusekelwe asebenza ngebhethri conglomerates.
Lezi zihlanganisa, ngaphezu kwakho konke, kufanele ichasiselwe egwadle. Livame ukusetshenziswa uma udala Interiors. Lokhu kwaziswa okuhlala isikhathi eside ukwedlula zobumba yendabuko, futhi ishibhile.
Metron - ingxube izingcezu ingilazi enombala futhi Aventurine. Isetshenziselwa ukwenziwa etafuleni eziqongweni, ifasitela Sills, baseboards.
Metal zobumba lesiRotuma. Lokhu wanyathela ofeleba kokuba ukuphakama ezingekho ngaphezu 4 mm ukusuka ishidi insimbi engagqwali 0.5 mm obukhulu. Basuke zigxilé iraba substrate ekhethekile, okuyinto kudala rigidity kunesidingo.
Lokhu KaMose ngezinto ezahlukene zigxilé substrate. Leaf KaMose has zonke izinzuzo zama-tile, kodwa zishukunyiswe ubukeka ezahlukene. It unamathele base anezikhala, ngakho-ke kulula ukusika, nakho kwenza kube lula kakhulu ukusingatha ezindaweni okunzima ukufinyelela kuzo kakhulu.
Lolu hlobo ngenalithi zazivela East. Kancane kancane, waqala ukunqoba abalandeli emhlabeni wonke. Akumangazi, ngoba imisebenzi okudalwe kule nqubo - kuba umhlobiso zikanokusho yasekuqaleni ingaphakathi, isipho esikhulu kubangani nomndeni. Ngakho, idayimane KaMose - kuyini?
Empeleni, kuba impahla ezithakazelisayo, lapho ungase ukwazi ukudala imihlobiso yasekuqaleni ngempela futhi emuhle. Le kit kuhlanganisa idayimane KaMose:
Isikimu-web, kanye nezimpawu kanye ungqimba ingcina;
acrylic zinhlayiya igcwele izikhwama ezahlukene;
Umsebenzi ku isithombe noma KaMose panel the diamond akunzima kakhulu, kodwa kuyodingeka ukuphikelela nokunakekela. Engingakusho nje ukusakaza ngokucophelela glue rhinestones ngesisekelo imigqa noma uvalo. Ngaphandle ukuthi isithombe elikhazimulayo kuyoba umhlobiso omuhle wezangaphakathi ekhaya lakho, kusenzima futhi ngeke sijabulise abalandeli izikebhe kunqubo.
Studio - Iyini? Yiziphi studio?
Umklamo we mbumbulu zezakhiwo njengoba ikhambi eliphelele